ဆရာသက်နှင်းဆွေ (ပုပ္ပါး) ရေးသားသော ၁၂ရာသီဖွားများအတွက်လက်ဆောင် ဆိုတဲ့ ပို့စ်ထဲမှ တဆင့် ဖတ်ရတာတွေပါ။
ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားများ (အောက်တိုဘာလ ၂၄ မှ နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်အတွင်း) (တန်ဆောင်မုန်းလ)
ဗြိစ္ဆာရာသီသည် ရာသီစက်ဝန်း၏ ရှစ်ခုမြောက် ရာသီခွင်ဖြစ်၏။ အနောက်တိုင်း နက္ခတ်တွင် (scorpio) ဟုခေါ်တွင်၏။ ဤရာသီခွင်ရှိ ကောင်းကင်ကြယ်စုတို့သည် ကင်းမြီးကောက်တစ်ကောင်၏ အသွင်သဏ္ဍာန်တည်ရှိကြ၏။ အာပေါဓါတ် (ရေဓါတ်) ကြီးစိုးသော ရာသီခွင်ဖြစ်၏။ အင်္ဂါဂြိုလ်မှ ပိုင်စိုး၏။ (၉) ဂဏန်းတို့စွမ်းအား သက်ရောက်မှုရှိ၏။ (သတွဂုဏ်) (သစ္စာကြီးမား၍ ဖြောင့်မတ်မှုဂုဏ်) သက်ရောက်၏။ နှစ်စဉ် အောက်တိုဘာလ (၂၄) ရက်မှ နိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက်အတွင်း မွေးဖွားသူများသည် ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားများ ဖြစ်၏။ ထိုသို့ ရက်အတိအကျမသိဘဲ တန်ဆောင်မုန်းလအတွင်းမွေးဖွားသူများသည်လည်း ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားများဟု တစ်ထစ်ချမှတ်ယူရမည်ဖြစ်၏။ (မ) ရာသီ၊ (သောမ) ရာသီလည်းဖြစ်ပေ၏။
ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတို့၏ ပင်ကိုယ်သဘာဝနှင့် အကျင့်စရိုက် လက္ခဏာများ
ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတို့သည် သစ္စာတရားဦးထိပ်ပန်ဆင်သူများ ဖြစ်ကြ၏။ ဖြောင့်မတ်သော စိတ်ထားရှိ၏။ သို့သော်စိတ်ထဲ၌ အငြိုးအတေးထားတတ်ကြ၏။ ကိုယ့်အပေါ် ထိပါးစော်ကားသူတို့အား တစ်နည်းနည်းဖြင့် တုံ့ပြန်ကလဲ့စားချေတတ်ကြ၏။ ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတို့၏ စိတ်၌ ခံစားချက်ဒဏ်ရာများဖြင့် ပြည့်နှက်နေတတ်၏။ ထို့အတူ ကိုယ်တိုင်အပင်ပန်းခံ ရုန်းကန်ရခြင်းများလည်း များစွာရှိ၏။ ဘ၀အစတွင် ခက်ခဲကြမ်းတမ်း၏။ ခက်ခဲသည်ဆိုရာတွင် မောင်နှမသားချင်းအတူတူမှာပင် ကိုယ်က ပိုပြီး ခက်ခဲပင်ပန်း၏။ အနစ်နာခံကြိုးစားရ၏။ သို့သော်အဖက်ဖက်မှ အခက်အခဲများကို ဇွဲနှင့်စွဲမြဲစွာ လုပ်ကိုင်ကြိုးစားရင်း သာမန်ထက်ပိုအောင်မြင်သွားတတ်၏။ ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတို့၏ ဘ၀တွင် မိမိအပေါ်နားလည်ပေးသူနည်း၏။ ထို့ကြောင့်လည်း တစ်ကိုယ်တည်းကျိတ်ပြီး ခံစားရသော ဒဏ်ချက်များတို့ကို ပြင်းထန်စွာ ခံစားရင်း အငြိုးအတေးစိတ်များ ထွက်ပေါ်လာရတတ်၏။ ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတို့သည် မိမိအပေါ် လွှမ်းမိုးခြင်းကို လုံးဝလက်မခံနိုင်ကြချေ။ အထူးလွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာ၊ သန့်ရှင်းစွာ နေထိုင်ရှင်သန်လိုကြ၏။ သို့သော် သူတို့ဘ၀တွင် အဘွား၊ အမေ၊ အစ်မ၊ အဒေါ် စသော အမျိုးသမီးကြီးတို့၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို (ကောင်းသော သဘောဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဆိုးသောသဘောဖြင့်ဖြစ်စေ) သက်ရောက်မှုရှိနေတတ်၏။ ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတို့သည် စိတ်အား၊ လူအားကောင်း၏။ ဘ၀တွင်ကြီးမြင့် ထင်ပေါ်ချင်တတ်၏။ ဘ၀၏ အောင်မြင်မှုကို တိုက်ပွဲပမာ တိုက်ယူလိုကြ၏။ အပင်ပန်းခံပြီး ကိုယ်စွမ်းဥာဏ်စွမ်းရှိသမျှ ကြိုးစားယူကြ၏။ ဘ၀အစတွင် ကျပ်တည်းသလောက် နောက်ဆုံးတွင် အောင်မြင်ကြရ၏။ အချိန်ကိုလည်း စောင့်ဆိုင်းလုပ်ကိုင်တတ်ကြ၏။ ဦးဆောင်နေရာထိပ်ဆုံးသို့ ရည်မှန်း၍ လုပ်တတ်ကြ၏။ စိတ်မြန်၏။ ဒေါသဖြစ်လွယ်၏။ သို့သော် အချို့ကိစ္စတို့တွင် ငါသိငါတတ်သဘောဖြင့် တဇွတ်ထိုးလုပ်မိတတ်ကြ၏။ အငြင်းလည်းသန်၏။ ကိုယ်ယုံကြည်ရာကို ခေါင်းမာစွာ ကိုင်စွဲထားတတ်၏။ ထို့အတွက် ငြင်းခုံရန်လည်း ၀န်မလေးချေ။ စိတ်မထိန်းချုပ်နိုင်ဘဲ ပျက်စီးနစ်နာတတ်၏။ အထူးသဖြင့် ဗြိစ္ဆာရာသီဖွား အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပျက်စီးနစ်နာတတ်၏။ ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတို့သည် အပြောချို၏။ တစ်ခါတစ်ရံ မာနကြီးတတ်၏။ စိတ်ထဲမထင်လျှင် ဘယ်လူကြီး လူကောင်းကိုပင်ဖြစ်စေ မခေါ်ဘဲ ဥပေက္ခာပြု နေနိုင်တတ်၏။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဂရုမစိုက်။ စိတ်အခန့်မသင့်က အငြိုးအတေးပင် ထားတတ်သေး၏။ အသက်ရှည်တတ်၏။ စီးပွားဥစ္စာ ချမ်းသာတတ်၏။ ရုပ်သန့်၏။ စကားပြောဆိုလျှင် စိတ်ပါလက်ပါ ပြောဆိုလာပါက ပြင်းထန်လာ၏။ လူ့သဘာဝကို သဘောပေါက်ကာ ပရိယာယ်သဘောများလည်း တတ်ကျွမ်း၏။ အခြွေအရံများ၏။ အ၀တ်ကောင်း၊ အစားကောင်းများ ၀တ်ရတတ်၏။ မိဘနှင့် ဝေးကွာနေတတ်၏။ အချို့ပညာရပ်တို့တွင် တစ်ပိုင်းတစ်စ ဖြင့်ရပ်ထားရတတ်၏။ ဗြိစ္ဆာရာသီဖွား အမျိုးသားများ အရက်သေစာ၊ ဆေးလိပ်တို့ကို ကြိုက်နှစ်သက်တတ်၏။ တစ်ခါတစ်ရံ ကြမ်းတမ်းခက်ထန် ပြုမူမိတတ်၏။ တစ်ခါတစ်ရံ မိဘ၊ ဆရာသမား အကြီးအကဲတို့စကားကို နားမထောင်ဘဲ နေတတ်၏။ အထက်လူကြီး၊ မင်းအစိုးရတို့၏ ချီးမြှင့်မှုကိုခံရကာ ဘ၀တွင်ကြီးပွားအောင်မြင်တတ်ကြလေ၏။ ထို့အပြင် ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတို့သည် မမြင်အပ်သော မြင့်မြတ်သည့် နာမ်လောကမှ ပုဂ္ဂိုလ်ထူးတို့၏ ပါရမီပဋ္ဌာန်းဆက်ဖြင့် စောင့်ရှောက်မှုကိုလည်း သိသာစွာ ခံရတတ်၏။
ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတို့၏ အချစ်ရေးနှင့် အိမ်ထောင်ရေး
ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတို့သည် အသိရခက်၏။ အကဲခတ်ရခက်၏။ ပတ်ဝန်းကျင်အမြင်အရ တစ်မျိုး၊ ကိုယ့်ခံစားမှုကတစ်သွယ် ဖြစ်နေတတ်ကြ၏။ ကိုယ်ကလည်း ကိုယ့်ခံစားချက်ကို အသိရခက်အောင်မျိုသိပ်နိုင်စွမ်းရှိ၏။ သပ်ရပ်သန့်ပြန့် ခန့်ထည်စွာ နေတတ်သဖြင့် အများနှင့်မတူ ထင်ရှား၏။ စန်းပွင့်၏။ မျက်နှာပွင့်၏။ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်တို့၏ စွဲမက်စိတ်ဝင်စားခြင်းကို အထူးခံရတတ်၏။ နှလုံးသားရေးရာတွင် ချစ်မိပြီဆိုက ဘ၀ကိုပင် ပုံအပ်ရန် ၀န်မလေးသူများ ဖြစ်ကြ၏။ ချစ်သူအပေါ် အလိုလိုက်၏။ စိတ်ရောကိုယ်ပါ ချစ်ခင်တတ်၏။ အပြန်အလှန် နားလည်မှုရှိ၏။ သို့သော် အချစ်ကြီးသကဲ့သို့ပင် စိတ်အပြောင်းအလဲမြန်၏။ မသင့်လျော်ဘူးဟု ဆုံးဖြတ်ပြီးက အချစ်ခံစားမှု၊ စိတ်ခံစားမှုကို မရမက မျိုသိပ်ထားတတ်ပြန်၏။ အချစ်ဦးနှင့် ဆုံဆည်းခွင့်မရှိတတ်ကြ။ ချစ်သူအပေါ် အနွံတာခံလျက် ပေးဆပ်ပြီးချစ်တတ်သလောက် ခံနိုင်စွမ်းကုန်သောအခါ အရွဲ့တိုက်တတ်ကြတော့၏။ အငြိုးအတေးထားတတ်ကြတော့၏။ ထို့ကြောင့် အချစ်ကြီးသူကိုပင် အလွန်မုန်းတီး နာကျည်းသွားတတ်ကြပြန်၏။ သို့သော် ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတို့သည် အများအားဖြင့် သစ္စာရှိ၏။ ဖြောင့်မတ်၏။နူးညံ့သိမ်မွေ့၏။ တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာ နေပေါ်လာတတ်၏။ အမိ၊ အစ်မတို့၏ ပတ်သက်စွတ်ဖက်မှုလည်း ရှိတတ်ချေ၏။
အိမ်ထောင်ပြုသောအခါ ကိုယ့်ထက်ကြီးသူနှင့် အိမ်ထောင်ပြုရတတ်ပြီး ဗြိစ္ဆာရာသီဖွား အမျိုးသမီး အများစုမှာ ကိုယ့်ထက်အသက်ငယ်သူနှင့် အိမ်ထောင်ပြုရတတ်၏။ အိမ်ထောင်မပြုမီ အမျိုးမျိုးရွေးချယ်စီစစ်ပြီးမှ အိမ်ထောင်ပြုတတ်၏။ သို့သော် တကယ်တမ်း အိမ်ထောင်ပြုသောအခါ သနားချစ်ဖြင့် ပြုမိတတ်၏။ အထူးသဖြင့် ဗြိစ္ဆာရာသီဖွား အမျိုးသမီးများ သနားချစ်ဖြင့် အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်ရင်း ဒုက္ခရောက်တတ်၏။ အိမ်ထောင်ရေးသောက ခံစားရတတ်၏။ ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတို့သည် တဇွတ်ထိုးလုပ်တတ်သော၊ အေးစက်စက်နှင့် ရက်စက်တတ်သော၊ ဘေးစကားကို ယုံလွယ်သောသူကိုမှ ရွေးချယ်မိတတ်၏။ ထို့ကြောင့် အိမ်ထောင်ရေးတွင် စိတ်ပင်ပန်းစရာများစွာကြုံတတ်၏။ အထူးရွေးချယ်ပြီးမှ လက်တွဲသင့်၏။ သို့သော် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တည်ကြည်အေးဆေးသော၊ သစ္စာရှိသော၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့သော မိမိ၏ ပင်ကိုယ်စိတ်စေတနာကောင်းတို့ကြောင့် မိမိချစ်သူ၊ မိမိအိမ်ထောင်ဖက်တို့ကလည်း တဖြည်းဖြည်း နားလည်လာကာ အိမ်ထောင်ရေး သာယာလာပါမည်။
ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတို့၏ အလုပ်အကိုင်နှင့် စီးပွားရေးအနေအထားများ
ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတို့သည် အလွန်ထူးခြားသော ဘ၀ပိုင်ရှင်များဖြစ်ပြီး ဘ၀အကွေ့အပြောင်းများစွာ ကြုံရတတ်၏။ အေးတိအေးစက်နှင့် ပြန်မပြော နားမထောင် ကိုယ်ထင်ရာ တဇွတ်ထိုးလုပ်တတ်၏။ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်မှုနှင့် အရာရာ အနှောင်အဖွဲ့မပါဘဲ လုပ်ကိုင်လိုတတ်၏။ရောက်ရာအရပ်တွင် တွေ့သောသူနှင့် လိုက်လျောညီထွေ နေတတ်၏။ ပေါင်းတတ်၏။ ပြောတတ်၏။ လုပ်တတ်၏။ စကားကတိကို တန်ဖိုးထား၏။ အလုပ်တစ်ခုမလုပ်မီ အပြန်ပြန်အလှန်လှန် စဉ်းစား၏။ မလုပ်မီ နောက်တွန့်နေတတ်၏။ စလုပ်ပြီဆိုသည်နှင့် ကျော်လွှားနိုင်၏။ ထို့ကြောင့် ထိပ်ဆုံးသို့ရောက်တတ်၏။ ထို့အပြင် ဘာမဆို သိုသိုသိပ်သိပ် လုပ်တတ်၏။ အများနှင့်မတူသော ရှုထောင့်မှတွေး၍ လုပ်တတ်၏။အများနှင့်တွဲ၍ လုပ်သည်ထက် ကိုယ်တစ်ဦးတည်းလုပ်က ပိုအောင်မြင်တတ်၏။ ထို့ထက် ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျလုပ်ကိုင်လေ ပိုအောင်မြင်လေ ဖြစ်၏။ စိတ်ကူးဥာဏ်အလွန်ကောင်း၏။ ထို့အပြင် အခြားသူတို့နှင့် ပြေလည်အောင် နေတတ်ပြီး ကူညီတတ်သော စရိုက်ကြောင့် မိတ်ကောင်း ဆွေကောင်းရတတ်၏။ သမရိုးကျ လမ်းဟောင်းအတိုင်းလုပ်ခြင်းထက် အရာရာကို ကိုယ်တိုင်လမ်းသစ်ထွင်ပြီး လုပ်က ပိုပြီးအောင်မြင် တတ်၏။ ခေတ်နှင့်အညီ လိုက်လျောညီထွေလုပ်က ပိုပြီးအောင်မြင်၏။ ရေရှည်လုပ်ငန်းထက် ပေါ်ပင်လုပ်ငန်းများက ပို၍ကောင်းကျိုးပေး၏။ ၀န်ထမ်းလုပ်က စာရင်းအင်းဘက်တွင် မလုပ်သင့်ပါ။ အလုပ်လုပ်ရာတွင် အကျိုးအမြတ်ဖြစ်အောင် တွက်ချက်ပြီး လုပ်တတ်သော်လည်း တကယ်လုပ်သောအခါ စိတ်ချမ်းသာမှုကို ရှေ့တန်းတင်၍ စိတ်အေးလက်အေးလုပ်တတ်၏။ ဘာပဲလုပ်လုပ် ဆုံးဖြတ်ပြီးက မြန်မြန်လုပ်ပါ။အချိန်ဆွဲမိက အလုပ်မဖြစ်တတ်ပါ။ ဆုံးဖြတ်ပြီးက တွန်းတိုက်လုပ်ပါလေ။ ဆန်းသစ်မှု၊ တီထွင်မှု၊ စွန့်စားမှု၊ ဥပဒေပညာ၊ ခွဲစိတ်ကုသမှု၊ သတင်းထောက်လှမ်းမှု၊ စူးစမ်းမှုတို့တွင် ၀ါသနာထုံပြီး ပါရမီရှိ၏။ လောကီပညာမှစ၍ ဗေဒင်၊ နက္ခတ်၊ မှော်ပညာ၊ နတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတို့ပါ ၀ါသနာထုံ၏။ သို့သော်လူသိမခံဘဲ လေ့လာလိုက်စားတတ်၏။ ဘာသာရေးတွင်လည်း ထူးချွန်၏။
အထူးကောင်းကျိုးပေးသော အလုပ်များမှာ နာမည်ကျော် စာရေးဆရာ၊ ပန်းချီဆရာ၊ ထောက်လှမ်းရေး၊ ကျောက်မျက်ရတနာ၊ တွင်းထွက်ပစ္စည်းမျိုးစုံနှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ ပန်းတိမ်အလုပ်၊ ဖိနပ်လုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးအလုပ်တို့တွင် ကောင်းကျိုးပေး၏။
ဘာပဲလုပ်လုပ် ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတို့သည် ကောင်းမွန်သောအလုပ်တို့ကိုသာ လုပ်သင့်၏။ ပင်ကိုယ်ဗီဇတွင်ပင် ကြီးပွားစေတတ်သော ပါရမီပါပြီးဖြစ်၏။ ဘာသာတရားကို ဦးထိပ်ပန်ဆင်ပြီး သမ္မာအာဇီဝကျကျ လုပ်သွားက စီးပွားဖြစ်ထွန်းတတ်၏။ ဥပဒေမလွတ်ကင်းသော အလုပ်တို့လုပ်က ဒုက္ခတွေ့တတ်၏။ ကောင်းမွန်စွာနေက ဘာအခက်အခဲရှိရှိ အောင်မြင်သွားတတ်ကြလေ၏။
ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတို့သည် မီးဘေး၊ လက်နက်ပေါက်ကွဲမှုဘေး၊ လျှပ်စစ်မီးရှော့ခ်ဖြစ်ခြင်းတို့ ကြုံတတ်၏။ အနည်းဆုံး အပူလောင်ခြင်းမျိုး မကြာခဏကြုံတတ်၏။ ဘုရားဂုဏ်တော် (၉) ပါးကို အမြဲပွားထုံသင့်၏။ စတီး(လ်) အစစ်ကိုဆောင်ထားသင့်၏။ အထူးသဖြင့် လျှပ်စစ်မီးတို့ကို ကိုင်တွယ်သုံးစွဲရာတွင် ကြိုတင်သတိရှိက ထိုအန္တရာယ်မှ လွတ်မြောက်ပေမည်။
ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတို့သည် ရောဂါဖြစ်ခဲတတ်၏။ ဖြစ်ခဲ့လျှင်လည်း အဖျားကြီးသော ရောဂါဖြစ်တတ်၏။ ထို့အပြင် ကူးစက်သော ရောဂါများ ဖြစ်တတ်၏။ ထို့အပြင် ခန္ဓာကိုယ်၏ လျှို့ဝှက်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတို့တွင် အနာရောဂါဖြစ်ခြင်း၊ ကျောက်ကပ်၊ အစာအိမ်နှင့် ဆီးရောဂါတို့ဖြစ်တတ်၏။ သို့သော် အန္တရာယ်ကြီးမားစွာ မဖြစ်တတ်ပါ။ ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတို့သည် ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ၊ ချင်း၊ ငရုတ်ကောင်းတို့ကို ပင်တိုင်ဓာတ်စာအဖြစ် စားပေးသင့်၏။ အမြဲမှီဝဲပေးခြင်းဖြင့် ရောဂါကင်းစင်ကာ ကျန်းမာရွှင်လန်းရတတ်၏။ အထူးသဖြင့် ကြက်သွန်ဖြူနှင့် ကြက်သွန်နီကို ပင်တိုင် စားသုံးပေးသင့်၏။
ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတို့၏ ဘ၀ကံကြမ္မာ အခြေအနေများ
ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတို့သည် ထူးခြားသော ဘ၀ပိုင်ရှင်များ ဖြစ်၏။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ကမှန်သည်ဟု ဆုံးဖြတ်ထားသည့်အပေါ်တွင် ခိုင်မြဲစွာ ရပ်တည်၍ လုပ်ပေရာ ကောင်းသော လမ်းကြောင်းပေါ် ရပ်တည်မိက ထိပ်ဆုံးရောက်အောင် ဖြစ်ထွန်းသွားတတ်ကြလေ၏။ ထိုသို့မဟုတ်ဘဲ မကောင်းသောလမ်းပေါ်ရောက်သွားကလည်း အ၀ီစိရောက်အောင် မိုက်တတ်၏။
ထို့ပြင် ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတို့သည် ကိုယ့်စိတ်ထဲတွင် မကြိုက်တော့က ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုမှ ဂရုမစိုက်တော့ချေ။ ပင်ကိုယ်သဘောထား လိုတတ်၏။ သို့သော် ဘ၀ပေး အခြေအနေအရပင် အချစ်ရေးတို့၌ အနှောက်အယှက်များ အလွန်ကောင်းပြီး သူတစ်ပါးထက်ပို၍ သည်းခံခွင့်လွှတ်တတ်၏။ ခွင့်လွှတ်နိုင်စွမ်းဘောင်ကျော်လာကလည်း အမျက်ကြီးကာ ရက်စက်စွာ တုံ့ပြန်တတ်၏။ ထို့နောက် ထိုသူမျိုးတို့ကို လုံးဝဥပေက္ခာပြုပစ်တတ်၏။ ကိုယ်ပိုင်အကြံဖြင့် ထိပ်ဆုံးရောက်တတ်၏။ သူတစ်ပါးတွေကလည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ်လိုက်ပြီး တုပတတ်ကြ၏။ အပေါင်းအသင်းမက်၏။ သို့သော် အစွဲမထားတတ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး အားနည်း၏။ ရှုပ်ထွေး၏။ အလွန်ချစ်သူကို ပစ်ခွာခဲ့ပြီး အခြားသူကိုပြောင်းချစ်ရန်လည်း ၀န်မလေးချေ။ အိမ်ထောင်တစ်ဆက်တည်း ထူထောင်ပါက ထိပ်ဆုံးရောက်အောင် ကြီးပွားတတ်၏။ တစ်ပါးသူတို့ကလည်း ကိုယ့်အပေါ် အခွင့်အရေးယူကာ ဒုက္ခပေးတတ်၏။ သူတစ်ပါးအကူအညီ ယူမိကလည်း အခြားပြဿနာတို့တွင် အသုံးချသွားတတ်ပြန်၏။ ထို့ကြောင့် သီးသန့်တစ်ကိုယ်တော်နေလေ ကောင်းလေဖြစ်၏။ ဆွေမျိုးရင်းထက် သူစိမ်းတို့က ပိုကောင်းတတ်၏။ ဘ၀တွင် အခြေခံမှစပြီး အမြင့်ဆုံးရောက်အောင် ကြိုးစားနိုင်စွမ်းကြလေ၏။ အခက်အခဲရှိသူများကိုပင် ကိုယ်ကျိုးမငဲ့ဘဲ ကူညီခြင်းသည် ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတို့၏ ဘ၀အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်၏။ သတိပြုရန်မှာ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းက သိပ်မဆက်ဆံလိုသူတို့ကို ကိုယ်က တန်းတူရည်တူ ပေါင်းသဖြင့် ကိုယ့်သိက္ခာထိပါးတတ်၏။ နှလုံးသားကို ဦးစားပေးသဖြင့် ခံစားချက် ပြင်းထန်၏။ ချစ်ဦးသူနှင့်ကွဲကာ အချစ်ဆက်ထုံးများစွာကြုံတတ်၏။ လူမျိုးခြား၊ ဘာသာခြား ကိုရှောင်ပါ။ နှလုံးသားတွင် အရွဲ့တိုက်လိုသော စိတ်များပေါ်တတ်၏။ ကိုယ့်ချစ်သူကို ကိုယ်ကပင် အသည်းခွဲ ကလဲ့စားချေတတ်၍ ကိုယ်တိုင်သာ အသည်းကွဲရတတ်၏။ စီးပွားရေးတွင် အစပိုင်း၌ အမျိုးမျိုးပြောင်းပြီး လုပ်ကိုင်ပြီးမှ မမျှော်လင့်ဘဲ မိတ်ဆွေကောင်းတွေ့ကာ မထင်မှတ်သော အထောက်အကူတို့ရရှိကာ မထင်မှတ်ထားသောထိပ်တန်းသို့ ရောက်ရှိသွားတတ်၏။ အသက် (၂၀)၊ (၂၃)၊ (၂၅)၊ (၂၈)၊ (၃၁) အရွယ်တို့တွင် အရွယ်နှင့်မမျှအောင် အောင်မြင်တိုးတက်မှုတို့ကြုံရမည်။ သတိပြုပါ။ အောင်မြင်ကျော်ကြားမှု၊ စီးပွားဥစ္စာတို့က ကိုယ့်ကိုဒုက္ခပြန်ပေးတတ်၏။(၃၁) မှ (၃၆) ကြားတွင် တက်လိုက်ကျလိုက်ဖြစ်နေမည်။ (၃၆)၊ (၃၈)၊ (၄၀)၊ (၄၁)၊ (၄၄)၊ (၄၇)တို့တွင်ထူးခြားစွာ ထိပ်တန်းရောက်အောင် ကံကောင်းသွားမည်။ အထူးသဖြင့် (၃၅)၊ (၃၆)၊ (၅၆)၊ တို့တွင် မင်းစိုးရာဇာ ချီးမြှင့်ခံရခြင်း၊ ကြီးစွာအောင်မြင်ခြင်း၊ စည်းစိမ်တိုးခြင်း တို့ဖြစ်မည်။ အသက် (၇၀) ကျော်အောင်ရှည်တတ်၏။
ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတို့၏ ဘ၀အောင်မြင်ရန် အဆောင်၊ အရောင်များ
ဤရာသီဖွားတို့သည် အတိုက်အခံအလွန်များ၏။ ကိုယ်ကလည်း မဟုတ်မခံစိတ် သတ္တိဗျတ္တိနှင့် အတိုက်အခံလုပ်တတ်၏။ အနက်ရောင်ရှောင်ပါ။ အနီရောင်၊ ကြက်သွေးရောင်၊ အ၀ါရောင်၊ အပြာရင့်တို့ကိုဝတ်ပါ။ အနီရင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်၏။ ပတ္တမြားလက်စွပ် ၀တ်ပါ။ ကျောက်အနီဆောင်ပါ။ စတီးလ်အစစ်ဝတ်ပါ။ ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်ပြည့်စုံကာ ရန်အပေါင်းနိုင်မည်။ ခြေသည်း လက်သည်းရှည် မထားသင့်။ခြေထောက်ဖုံးအောင် လုံချည်၊ ဘောင်းဘီမ၀တ်သင့်။ မလိုအပ်ဘဲ မျက်မှန်မတပ်သင့်။ ဆွဲကြိုးဆွဲက အရှည်ကြီးမဆွဲဘဲ တိုတိုဆွဲကာ လည်တိုင်အလှဖော်ပါ။ မျက်ခွံပေါ်မှာ ဆေးမချယ်သင့်။ ဖရိုဖရဲပုံစံကို နှစ်သက်၏။ ဘိုသီဘတ်သီနေခြင်းကိုက ထူးခြား၏။ ခေတ်မီ ထူးခြားတတ်၏။ ခေတ်မီစတိုင်နှင့် ရှေးဟောင်းစတိုင် တွဲဖက်ဝတ်တတ်၏။ ထိုသို့ဝတ်ခြင်းကိုက ထူးခြားတတ်၏။ မျက်မှောင်ကြုတ်မနေဘဲ အမြဲပြုံးနေပါ။ အလွန်အမင်းမပြင်ဆင်ဘဲနေလေ ပေါ်လွင်လေဖြစ်၏။ သာမန်နေထိုင်ခြင်းထက် ဓါတ်ပုံရိုက်က ပိုထင်ပေါ်တတ်၏။ ကြီးလွန်းသောပစ္စည်း၊ ထူထဲလွန်းသောအ၀တ်များ နှင့်မလိုက်ဖက်။ ပေါ့ပါးလွတ်လပ်စွာ ၀တ်စားပါ။ နေထိုင်ပါ။ စကားပြောသောအခါ လိုရင်းပြောလေ ညှို့ဓါတ်ပါလေဖြစ်၏။ ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတို့သည်အထူးသဖြင့် (၁) အယုံလွန်ခြင်း၊ (၂) ကူညီတတ်လွန်းခြင်း၊ (၃) ကိုယ်ယုံကြည်ရာ တဇွတ်ထိုးလုပ်တတ်ခြင်းကြောင့် ထင်ရာစိုင်းသလို ဖြစ်သွားခြင်းတို့ကို အထူးရှောင်ပါ။ (၄) ခေတ်နှင့်အညီ အပြောင်းအလဲ၊ အသစ်ထွင်ပါ။ အကြံသစ်တွေကို လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ပါ။ ရဲရဲလုပ်ပါ။ မုချအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။ ဘ၀တွင် (၃၊၆၊၉) ဂဏန်းတို့ကောင်းကျိုးပေး၏။ အ၀တ်ကောင်းများကိုလည်း ၀တ်ရတတ်၏။ ဗြိစ္ဆာရာသီဖွား အမျိုးသားများ အရက်သေစာ စွဲမက်သွားတတ်သဖြင့် အထူးရှောင်ပါ။ စကားပြောပြင်းထန်ခြင်းနှင့်မဟုတ်မခံအငြိုးကြီးခြင်းတို့ကိုရှောင်ပါ။စစ်မှန်သောသတ္တိရှိသူများဖြစ်သည့်အတွက်သတ္တိကိုမှန်ကန်စွာအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘ၀အောင်မြင်မှု ထိပ်ဆုံးသို့ရောက်ရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပေသတည်း။
ဒါကတော့ ၀ိုင်းရဲ့ ရာသီဖွားအတွက်ဖော်ပြပေးထားတာပါ။ ဖတ်ရသလောက်တော့ တချို့အချက်တွေဟာ ဘ၀နဲ့ ထပ်တူညီ မှန်ကန်နေလို့ပါပဲ။ တခြားရာသီဖွားတွေအတွက်လည်း လင့်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ် လင့်ကနေတဆင့် သွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်
မိဿရာသီဖွားများအတွက် (မတ်လ ၂၁ရက်မှ ဧပြီလ ၂၀ရက်အတွင်းမွေးဖွားသူများ)
ဓနုရာသီဖွားများအတွက် (နိုဝင်ဘာ ၂၃ မှ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ရက်အတွင်း မွေးဖွားသူများ)
ကန်ရာသီဖွားများအတွက် (သြဂုတ် ၂၄ရက်မှ စက်တင်ဘာ ၂၂ရက်အတွင်း မွေးဖွားသူများ)
တူရာသီဖွားများအတွက် (စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်မှအောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်အတွင်း မွေးဖွားသူများ)
မေထုန်ရာသီဖွားများအတွက် (မေလ ၂၂ ရက်မှ ဇွန်လ ၂၁ ရက်အတွင်း မွေးဖွားသူများ)
ကုမ်ရာသီဖွားများအတွက် (ဇန်န၀ါရီလ ၂၁ မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ အတွင်း မွေးဖွားသူများ)
ကရကဋ်ရာသီဖွားများအတွက် (ဇွန် ၂၂ မှ ဇူလိုင် ၂၂ အတွင်း မွေးဖွားသူများ)
သိဟ်ရာသီဖွားများအတွက် (ဇူလိုင် ၂၃ ရက်မှ သြဂုတ် ၂၃ ရက်အတွင်းမွေးဖွားသူများ)
မကာရရာသီဖွားများအတွက် (ဒီဇင်ဘာ ၂၂ မှ ဇန်န၀ါရီ ၂၀ အတွင်းမွေးဖွားသူများ)
မိန်ရာသီဖွားများအတွက် (ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉မှ မတ်လ ရက်၂၀အတွင်း မွေးဖွားသူများ)
ဒီကြားထဲ ဒီဇင်ဘာလ ၅ရက်နေ့နဲ့ ၆ရက်နေ့ မှာ ဘာတန်ကျွန်းကို အလည်သွားမှာဖြစ်လို့ သူငယ်ချင်း အားလုံးကို ဒီမှာပဲ နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ် ခရီးက ပြန်လာမှပဲ ပို့စ်အသစ်တင်နိုင်ပါတော့မယ်
[P.S. ၆ရက်နေ့မှာ ဆင်ကဘူက ဆောင်းဆောင်းရဲ့ မွေးနေ့ပွဲ အစီအစဉ်မှာ ပိုင်အဲလာ(စပိန် ပင်လယ်ထမင်းကြော်)၊ မုဆာခါ (ဂရိ)၊ စပါကတ်တီ (အီတာလျှံ ခေါက်ဆွဲ) တို့လည်း လွတ်ပြီ ပြီးတော့ ဇာတ်ပွဲလည်း မကြည့်လိုက်ရတော့မှာကို စိတ်မကောင်းဘူးကွာ :P အခုကတည်းက မွေးနေ့အတွက် ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် Happy Birthday ပါ ဆောင်းဆောင်းရေ... ထာဝရ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ]
Posted by Waing at 12/04/2009 10:00:00 PM
ရာသီခွင် တွေ ....ကိုပေါ့ခင်ဗျာ..
ဗေဒင်လည်း ဖြစ်တာပဲ ..
သိချင်တာလေး တွက်ချက်ပေးနိုင်ရင် ကူညီပါအုန်း ...
ဒီလရာသီဖွားတွေကတော့ ကောင်းဗျာ။ =)
မ၀ိုင်ရေ. ဧပြီ 21 မှ မေ 21 ပြိဿရာသီဖွါးတွေအတွက် မပါဘူးလားခင်ဗျာ။ ဖတ်ကြည့်ချင်လို့ပါ.။
ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ပို့စ် သွားဖတ်ဖြစ်တယ်